တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: June 2012
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:40 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:36 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 2:16 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 4:34 PM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 3:21 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:03 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:56 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:27 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:20 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 6:04 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 4:32 AM No comments:
"အမေစုရဲ့...ဗြိတိန် ပါလီမန် မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ"
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:09 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:54 PM No comments:
ဒေါင်းနင်းလမ်း ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖခင်ရဲ့ အောင်ဆန်း အက်တလီ စာချုပ်
အောင်ဆန်း - အက်တလီ စာချုပ် (၁၉၄၇)
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:39 AM No comments:
Dr. Daw Aung San Suu Kyi speaks the historic address both Parliament of UK from Westmenster Hall (1)
This is well known speaker of the Burmese pro-democracy leader who guide to speakahistoric addressing both Parliament of UK from Westminster Hall. May I be sharing this kind of News to support any experience for all of you. May I be wishes for all of you here.
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 8:54 AM No comments:
Dr. Daw Aung San Suu Kyi speaks the historic address both Parliament of UK from Westmenster Hall (2)
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 8:51 AM No comments:
LONDON — Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi met British heir to the throne Prince Charles on Thursday ahead of her historic address to both houses of parliament.
Her royal encounter on the third day of her first trip to Britain in 24 years came as the British government confirmed it had invited Myanmar's reformist president Thein Sein to visit London.
"He is due to visit the UK in the coming months to continue the discussions they began when the Prime Minister was in Burma in April," saidaspokesman for Cameron.
Downing Street said Suu Kyi was "aware of the invitation."
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 8:31 AM No comments:
Labels: News, မူလစာမျက်နှာ
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 7:12 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 6:54 AM No comments:
Dr. Daw Aung San Suu Kyi's Honorary Doctor of Civil Law
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:19 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာ ဆွေးနွေးဖလှယ်မှုများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှ ဆွေးနွေးမှုများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့မှာပဲ လန်ဒန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တော့ အဲဒီ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ အတွင်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်တွေမှာ အခြေခံကျကျ အပြောင်း အလဲတွေ လိုအပ်နေတုန်းပဲဖြစ်သလို ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ လူထုကိုပါ အကျိုးရှိစေမယ့် အစီအစဉ်တွေ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်မယ်လို့လည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုအောင်လွင်ဦး ကပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုတွေလို ပြဿနာမျိုးတွေဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အပါအ၀င် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရေးတကြီး လုပ်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြသ နေတယ်လို့ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အဖြစ် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ လူပေါင်း ၅၀ ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး၊ အများ အပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့သလို၊ ထောင်သောင်းချီ အိုးအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အခြေခံဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းတဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ လန်ဒန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် က နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်တာပါ။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:57 AM No comments:
ဒါပေမဲ့... သူဟာ နာကြည်းမှုတွေကို
မေတ္တာနဲ့ လမ်းခင်း လျှောက်လှမ်းခဲ့တယ်...။
သူဟာ သူ့ ပြည်အတွက်
သူဟာ သူချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်
သူဟာ အများအတွက် ဦးစားပေးလို့
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 2:54 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:11 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:30 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 6:17 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:49 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 4:27 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:45 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 4:20 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 3:55 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:39 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁၇ ရက်ကြာ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ ခရီးစတင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁၇ ရက်ကြာ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ ခရီး စဉ်ကို ယနေ့ ဇွန်လ ၁၃ ရက် နေ့ နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၅၀ တွင် စတင်၍ TG 304 ထိုင်းလေယာဉ်ဖြင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခရီးစဉ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဖာမြို့သို့သွားရောက်ပြီး ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံတွင်
မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့သို့သွားရောက်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုကို ကိုယ်တိုင်လက်ခံယူမည်ဖြစ်သည်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:14 PM No comments:
Labels: News, သတင်း, ဆောင်းပါး
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 11:15 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:29 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 7:15 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 7:14 AM No comments:
ငါတို့ ယုံကြည်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ
သတိကင်းသော နေ့ရက်တွေကြောင့် အမှန်တရား ကင်းမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်..။
အကောင်းဆုံးကတော့ မတ္တံ မညေယျ မေဓာဝီ လို့ ဆိုထားပါတယ်..။ အတိုင်းတာ တစ်ခုကို သိတဲ့ ပညာရှိသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာ နှစ်သက်ပါတယ်...။ ထောင်ချောက်တစ်ခုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည် မဟုတ်ပါဘူး။
အမှန်တရားတာဆိုရင် မကြာခင်က ဖြစ်ပွားသွားသည့် ကိစ္စများကို အလွယ်တကူ လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပညာရှင်တွေ သိကြမည်ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက်တယ်ဆိုတာ မသိကြလို့ ပြဿနာဆိုတာ ဖြစ်လာကြတာပါ..။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 2:33 AM 1 comment:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:53 PM No comments:
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူ စတင်ထုတ်ဝေမည်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ၁၉ ကြိမ်မြောက် ငွေစက္ကူအမျိုးအစားသစ်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက် နေ့တွင် တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူသစ်စတင် ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ မှတစ်ဆင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူ အမျိုးအစားသစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင် ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေစက္ကူသစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ငွေကြေးဌာနတွင် လည်းကောင်း၊ ဘဏ်များနှင့် အစိုးရ ငွေတိုက်များတွင် လည်းကောင်း ဘဏ်ဖွင့်ချိန် အတွင်း ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:57 PM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:12 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:18 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:07 AM No comments:
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:29 AM No comments: